အသုံးများသောလိမ်လည်မှုများ PMO ကိုသင်လုပ်ချင်သောအခါသင့် ဦး နှောက်ကသင့်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ဘုံသင် PMO ဖို့လိုတဲ့အခါသင့်ဦးနှောက်ကိုငါပွောမညျတည်ရှိသည်။
ချည်ဖို့ LINK (အခြားယောက်ျားတွေစာရင်းတည်ရှိသည်)
ဇန်နဝါရီလမှာကျွန်တော့်ရဲ့ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲကိုစစတုန်းက PMO ကိုအစဉ်အမြဲစွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်။ သို့သော်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ရက်ကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညှိနှိုင်း။ “ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်၍ PMO” ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအားနည်းချက်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တုိ့သည်အတုများဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်သည်အထိထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြောမိသည်။ အကြောင်းပြချက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုကျွေးမွေးနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ဆင်ခြေဆင်ခြေစာရင်းကိုပြုစုလိုသည်။ ဤအရာများကိုဖတ်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်“ ညှိနှိုင်းခြင်း” မဟုတ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းနေသောစိတ်များဖြင့်ပြုလုပ်သော BS အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွန်အားနှင့်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ထပ်လောင်းအတည်ပြုချက်ကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ ဒီနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ခံစားရသောကျွန်ုပ်၏ဘုံစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအနည်းငယ်ကိုကြည့်ပါ။ (၁၃ ရက်သည်ကျွန်ုပ်အသက် ၂၁ နှစ်၊ ကျွန်ုပ်၏အသက်တာ၌ PMO မပါသည့်အသက်အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ ယခုအသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်နေပြီးကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူကြောင်းဂုဏ်ယူသည်။ )
"ငါ XXX အစွန်းရောက် porn ကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ငါ vanilla လိင်ဆက်ဆံသည်အထိအချိန်တိုင်းငါဖုန်းခေါ်မည်။ ထို့နောက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူလိမ့်မည်။ ” (ဒါက BS လို့သိတယ်။ သင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မလုံလောက်ဘူး၊ သင်ရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားနေသမျှဆီကိုပြန်သွားပါမယ်)
“ နက်ဖြန်နေ့ငါစမည်” (ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအများဆုံး)
"ဒီညငါ့နောက်ဆုံးညဖြစ်လိမ့်မည် ငါအရမ်းခဲယဉ်းစွာ cum နှင့်အစဉ်အမြဲ fapping မှနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်! " (ငါဒီဟာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ)
"ဒီညငါ SOIRD ခဲ့တဲ့ XXX အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးညဥ့်နက်နေသည့်အဖြစ်အပျက်ကိုဤမျှဆိုးဝါးသောအရာအဖြစ်မမှတ်မိစေလိုပါ!” (အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်ကို PMOing ထဲမှထပ်မံထုတ်ယူပါကစိတ်ကူးမကောင်းပေ။ )
အမှတ်ကဘာလဲ။ ကျန်တဲ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် PMOing လုပ်နေတာလို့ကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူး။ ” (ဒါကမင်းကို fapstronaut တစ်ယောက်အနေနဲ့သဘောတူရမယ့်အဓိကတစ်ခုပါ။ သင်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းရချင်သလဲ။ ဘယ်လောက်အထိလုံလုံလောက်လောက်ရှိသလဲ။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏တိုက်တွန်းမှုနှင့်ပြင်းထန်မှုများကျဆင်းသွားရုံသာမကသင်နားလည်သဘောပေါက်သည်။ သင်၏စွဲလမ်းမှု၏ရယ်စရာ။ )
ငါရည်းစားရှိရင်ငါနုတ်ထွက်မှာ။ တစ်ကိုယ်ရေနေချိန်မှာကျွန်မမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ ” (ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည့်အချက်မှာသင်သည်သင်၏ရည်းစားအတွက်အခြားဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုပျက်ပြားသွားစေနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုပင်ကောင်းစွာစလုပ်နိုင်သည်၊ ဟုတ်ပြီ၊ သင်ကြားသိရသည့်အတိုင်း၊ ဤအစီအစဉ်နှင့်အတူကပ်ပါ နောက်ပြီးမင်းကိုမိန်းကလေးရဖို့ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ )
PMO သည် -x- ပြwithနာကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ (ဤအစီအစဉ်၏အကြံဥာဏ်သည်သင်၏ ဦး နှောက်အားပြescapeနာများမှမကင်းစေရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဆင်ခြေကိုရေးပါသို့မဟုတ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြေညာပါ။ စကားလုံးများကိုသင်၏ပါးစပ်မှကြားလျှင် PMO သည်သင်၏ပြproblemနာနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားဆက်စပ်မှုရှိသလား။ အားလုံးအကူအညီတောင်း?)
အကွံဉာဏျ၏အရေးအပါဆုံးအပိုင်းအစဖြစ်ပါသည်:ဘယ်အချိန်မဆိုအတော်လေးနိုင်သလား။ NOW ကအကောငျးဆုံးအခြိနျ IS ။ NOW က START ။ သင်မနက်ဖြန်အတူတူ BS ဆိုလိမ့်မည်။ အစီအစဉ်ယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော့။
သင်တိုက်တွန်းရခဲ့လျှင်, သင်ကြလိမ့်မည်ကို fuck ဆိုတဲ့ပြေးအခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ပါ တစ် ဦး ပြေးပြေးယူပါ။ သင်ဝင်ရောက်နေသောထောင်ချောက်ကိုသဘောပေါက်ပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆင်ခြေထည့်ပါ။ Godspeed ။